TAHRIIBKA: Dadyow Afrikaan Kontoonero lagu Daabulay Oo Neeftu Ku dhegtay | Afrikada
TAHRIIBKA: Dadyow Afrikaan Kontoonero lagu Daabulay Oo Neeftu Ku dhegtay
8 ruux oo 6 carruur yihiin ayaa konteenaro dhexdooda laga helay. Dadkani ayaa neeftu ku dhegtay markii knoteennarada birta ah la furay, Waqooyi Galbeed wadanka Liibiya. Arrintan ayaa dhacday maalintii Isniinta.
Madaxda wadanka Liibiya ayaa sheegay in 90 qof ay ku jireen konteenarka iyagoo xaaladoodu meel xun ay gaartay kadibna waxaa loola cararay cusbitaallada si loo daweeyo, agaasinta dhanka nabadgelyada ee magaalada Zuwarah ayaa warkan u sheegay warfaafinta.
Dadkani ayaa ahaa dad muhaajinriin ah oo ka kala yimid wadammada Afrika iyo Carabta iyo sidoo kale wadammada Paakistaan iyo Bangladheesh sida warbixintu qortay .
Agaasinka magaaladaasi dadkan lagu qabtay ayaa sheegay in muhaajiriinta lagu soo khufulay konteenar dhexdiisa ayna muddo dheer halkaasi ku jireen.
Liibiya ayaa ah meel ay ka gudbaan muhaajiriinta u socdaaleysa ama doonaya in ay ka udbaan badaha u dhexeeya wadammada Yurub iyo Afrika, waxaana gaar ahaan ay diiradda saaraan wadanka Talyaaniga.
Tan iyo intii ay dhacday dowladda Liibiya sanadkii 2011-dii, ayaa wadanku waxaa gobolladiisa Waqooyi Galbeed ay xarun u noqotay muhaajiriin qalaad kuwaasi oo si sharci darro ah uga tallaabayey badweynta Medditerranean-ka halkaasi oo ay uga sii tillaabayeen wadammo ku yaal qaaradda Yurub.